संक्रमितको निधन भएपछि एम्बुलेन्स छोडेर भागे स्वास्थ्यकर्मी, श्रीमती घण्टौं सम्म एम्बुलेन्समा एक्लै बसिन् – Dainik Sangalo
August 2, 2020 298
काठमाडौं । चीनवाट फैलिएको कोरोना अहिले विश्वव्यापी भएको छ । एसियामा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित हुनेमा भारत एक नम्बरमा छ । विश्वमै ३ नम्बरमा रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि त्रा समा काम गरिरहेका छन् ।
यसैबीच भारतको बिहारस्थित सुपौलमा उपचारको लागि लैजानेक्रममा एक कोरोना संक्रमितको निधन भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु एम्बुलेन्स छोडेर भागेका छन् । उपचारका क्रममा एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजादै गर्दा संक्रमितको निधन भएको हो । एम्बुलेन्समै संक्रमितको निधन भएपछि एम्बुलेन्स चालक र स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेन्स छोडेर हिडेका हुन् ।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल लाने क्रममा बाटोमै निधन भएको थियो । त्यहाँ रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमितको निधन भएपछि भागेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । संक्रमितको निधन पछि पनि एम्बुलेन्समा उनकी श्रीमती भने बसिरहेकी थिइन् । तर उनलाई सोध्न वा सहयोग गर्न कोहि पनि गएनन् ।
कोरोना संक्रमितको निधन पछि पनि घण्टौँसम्म त्यहाँ कोहि मानिस सहयोगका लागि नआएको भारतीय संचार माध्यले जनएका छन् । परिक्षण पछि उनको श्रीमतीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । उनलाई अस्पताल नलगेर होम क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । भारतको अस्पताल पनि संक्रमितले भरिएका छन् । स्वास्थ्य समस्या आएपछि मात्र संक्रमितलाई अस्पताल लगिन थालिएको छ ।
कोरोनाका कारण भारतमा अहिलेसम्म ३७ हजार ४१५ जनाको निधन भएको छ भने १७ लाख ५४ हजार ११७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यहाँ ५ लाख ६८ हजार ५९९ जना उपचाररत छन् ।
Prevकाठमाडौंमा कोरोना आ’तंक: बग्गीखानाका ३७५ जना ट्राफिक प्रहरी क्वारेन्टिनमा
Nextमनभरी पिडा बोकेर लामो श्वास फेरिरहेका विपद् पीडितलाई सरकारले दिने भयो एक लाख
मलेसियाको खुला पार्कको छाप्रोमा अलपत्र नेपाली आमा छोरा ! उद्धारको लागि अपिल” (सेयर गरौ)
विप्लवले गर्यो यस्तो भयङ्कर ठूलो तयारी, अब के गर्ला ओली सरकार ?
बाहिरियो अर्को गो’प्य भिडियो, बिहे हुनु भन्दा अघी नै गर्थे य’स्तो